Xaflad loo qabtay 85 xubnood oo kamida shaqaalaha dawlada oo ka qalin jabiyey machadka tobabarka shaqaalaha dawlada ee CSI ayaa maanta lagu qabtay hotel Ambassador ee magaalada hargaisa
Shaqaalahan oo mudo 7 bilooda baranayey maaraynta mashaariicda ayaa waxay ka kala socdeen wasaaradaha Waxbarashada,Caafimadka,Kaluumaysiga,Qorshaynta,Macdanta iyo Wakaalada biyaha ee magaalada hargaisa .
Tobabarkan awood dhisida shaqaalaha dawlada Capacity surge project (CSP2) ayaa waxaa laga maal galinyay sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF,waxaana fulinayey machadka tobabarka shaqaalaha dawlda ee CSI .
Xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirada wasaaradaha cadaalada,qorshaynta ,gudoomiyaha hayada shaqaalaha dawlada ,agaasimaha machadka tobabarka shaqaalada dawlada, Agaasimaha wasaarada waxbarashada ,Agaasimaha wasaarada macdanta iyo tamarta,xubno ka socda DFID,xubnaha qalinjabinayey iyo martisharaf kale,waxaana gudoomineyey wasiirka wasaarada qorshaynta qaranka mudane cali ismaciil xuseen jirde .
Ugu horayna waxa xaflada furay wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka mudane cali Ismacil Xusen(Cali shoombe) oo ka hadlay xafladan ayaa waxaa uu sheegay muhiimada ay leedahay aqoontu waxaanu xusay wasiirku in qiimaha uu bini aadam leeyahay tahay waxbarasho sheegayna horumarka bulshadu inay ku xidhan tahay hadba aqoonta iyo tabobarka ay bulsho leedahay.
Sidoo kale waxaa madasha isna ka hadlay gudoomiyaha hayada shaqalaha mudane Maxamed mixile boqore ayaa ugu horayn waxaa uu u mahad naqay shaqalaha ka qalin jabiyey machadka tobarka shaqaalada dawlada waxaana uu ka waramay muhiimada mashruucani u leeyahay shaqaalaha dawlada si loo hurumariyo tayada shaqaalaha dawlada.
Waxaa isna dhankiisa ka hadlay Agaasimaha Machadka shaqaalaha dawlada mudane guleed Omer ayaa isna dhankiisa ka waramay tobabarkan iyo madadii uu socday marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray waxaana uu sheegay in tobabarkan uu ka qabsoomayeymagaalooyinka Hargaisa ,Ceerigaabo iyo Las-anood .
Intii xafladani socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay propsalo ay qoreen wasaaradihii iyo wakaladadihii tobabarkan qaadaanayey.
Gabagabadii xafladan waxaa shahaadooyin la gudoon siiyey xubnihii dhamaystay tobabarkan sidoo kalena waxaa abaal marino la godoonsiiyey wasaaradahii iyo xubnihii ugu dhibcadaha badnaa imaanshaha tobabarka
Maalinta caalamiga ah ee deegaanka oo sannad kasta la xuso 5-ta June ayaa si wayn looga xusay Jamhuuriyadda Somaliland. Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga ayaa Hotel Guuleed ee Magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad balaadhan oo lagu xusayo maalintan oo ay ka soo qaybgaleen masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Somaliland, hay’adaha wadaniga ah iyo kuwa caalamiga ah, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Hal-ku-dhegga sanadkan ayaa ah “Dhiiri galinta Tamarta Badalka u Noqon Karta Dhuxusha iyo Xaabada”
Marwadda Koowaad ee Qaranka Somaliland Aamina Waris Sh. Maxamuud Jirde oo furitaanka munaasabadda ka hadashay ayaa tidhi “Nolosha dhaqan dhaqaale ee dadka reer Somaliland waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool,dalaga beeraha iyo khayraadka dhirta, taasi waxay marag madoon u tahay sida tooska ah iyo sida dadban ee nolosha dadka Somaliland ugu tiirsan tahay dhirta iyo daaqa. Hadaba, maanta oo ah maalin wayn anigoo ka faa’idaysanaya fursadan qaaliga ah waxaan bulshada reer somaliland u sheegayaa inay deegaanka dalkooda ilaashadaan, oo ay feejignaan dheer u yeeshaan cidkasta oo burburinaysa; hadaanay bulsho waynta reer somaliland la shaqayn Wasaaradda Deegaanka suurtagal noqon mayso in Wasaaraddu geed walba ay askari iyo qof shaqaala ah hoos dhigto”
Dhanka kalena, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Hourmarinta Reer Miyiga Somaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil (Baandare), ayaa iyaduna ka warrantay ahmiyadda deegaanku u leeyahay nolosha iyadoo fasir ka bixisay dhibaatadda ugu badan ee hadda haysata oo ay ku tilmaantay gummaadka dhirta qoyan ee laga shidayo dhuxusha, waxaanay tidhi “waad arkaysaan maanta dhibaatada ina haysata ee ay keentay cimiladda isbeshay hawadii ayaa kululaatay, cadceedi ayaad mooda in dusheena la saaray , roobabkii ayaa yaraaday oo inaga raagay , markaa maanta waxay u baahanahay haweenow idinkaa kijada ku jiree in aynu bedelno isticmaalka dhuxusha oo aynu ku bedelno tamarta kale”
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka ayaa isaguna ka waramay muhiimadda xuska maalinta iyo sida ay muhiimka u tahay in la isku baraarujiyo hadba wixii deegaanka dhibaato ku haya waxaanu sheegay in nolosha dadkeeenu ku xidhantahay wax soosaarka deegaanka dadka aduunkana aynu uga nugul nahay waxyeeladda cimiladda isbedelaysaa waxaanu yidhi “Nolosheenu waxay ku xidhantahay xoolaha, xoolaha noloshoodu waxay ku xidhatahay daaqa dhulka ka soo baxa hadii daaqa la waayana xoolaha la waayi doona, hadii xoolaha la waayana nolosheena la waayi doonaa”
Waxa kale oo iyaguna halkaa ka hadlay Wasiiro ka tirsan xukuumada iyo xubno ka socday shirkadaha tamarta dhuxusha lagu beddelayo keenay, dhammaantoodna waxay dhiirigaliyeen in la ilaaliyo deeganka lagana takhaluso wixii dhibaato ku keenaya oo ay ugu horrayso gubidda dhirta si dhuxul looga sameeyo.
Wasaaradda degaanku iyada oo la kaashanaysa Wasaaraddaha Ganacsiga, Maaliyada iyo Tamarta waxay ku guulaysteen in cashuur dhaaf loo sameeyo tamaraha badalka u noqon karta dhuxusha iyo xaabada sida gaasta hawada ah ee la shito (Butane gas), cashuur dhaafkaas oo loo sameeyay wuxuu keenay in qiimahoodu hoos u dhaco oo taasina ay keentay in dad badani iibsadaan. Tusaale ahaan haanta 10 kg ee gaasta la shito ah shirkada SomGas waxay siin jirtay 30 Dollar bilawgii, halka manta ay ku iibiyaan 20 Dollar.
Sidoo kale, Wasaaradda Degaanku waxay ka howl gashay sidii loo dhiiri galin lahaa isticmaalka geedka garan waaga (prosopis) oo laga heli karo xaabo iyo dhuxulba, taas oo badal u noqon karta dhirta kale ee la gumaadayo. Waxaa cilmi baadhiso badan oo laga sameeyay lugu ogaaday in geedka garan waagu noqon karo badal fiican, kaas oo buuxin kara kaalinta dhirta kale.
Wasaaradda degaanku waxa kale oo ay ku guulaysatay in la sameeyo xeerka kaymaha iyo duur-joogta 69/2015. Xeer kaasi wuxuu wax wayn ka tari doonaa ilaainta iyo daryeelka dhirta iyo duur-joogta.
Ugu danbaynna, Wasaaradda Deegaanku waxay ugu baaqaysaa bulshada Somaliland in ay daryeelaan deegaanka, waayo deegaanka fayow ee badqaba ayuun baa lagu noolaan karaa, waana waajib saaran qof kasta oo muwaadin ah inuu dalkiisa iyo dhulkiisa ka ilaaliyo wixii dhibaato u keenaya.
Hargeysa– Madaxweynaha Jahmhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta furay Shirka 9aad ee Isuduwidda Mucaawinooyinka Somaliland oo lagu qabtay Hudheelka Ambassador ee caasimadda Hargeysa.
Shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxa ka qaybgelaya wakiillo ka socda dawladaha Somaliland ka taageera dhinaca hormarka, saaraakiil sarsare oo ka tirsan hay’adaha Qaramada midoobey,laamaha kala duwan ee dawladda Somaliland, wakiilo ka socda bulshada rayidka ah iyo saxaafadda gudaha.
Waxaa shirkan wada guddoominya Wasiirka Qarsheynta Qaranka Mudane Cali Xuseen Ismaacii (Cali Shoombe), Kira Smith Madax-xigeenka safaaradda Denmark ee dalka kenya, Phil Evans madaxa Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee dawladda Ingiriiska (DFID) u qaabilsan Somaliland, iyo Peter de Clercq ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee isuduwidda hawlaha bani’aadanimo ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Somaliland.
Labada maalmood ee uu shirku socdo waxa lagu gorfayn doonaa habsami-socodka hawlaha horumarineed ee qaranka, diyaar-garawga doorashooyinka soo socda ee dhici doon bisha March, 2017, qiimeynta aafooyinkii abaaruhu geysteen iyo sii amboqaadka Qorshaha Horumarinta Qaranka ee shanta sanno ee soo socda.
Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa furitaankii shirkan ka sheegay in xaaladda amni iyo nabad gelyo ee ka jirta Somaliland ay suurto-gelisay wadashaqayn buuxda oo dhexmarta dawladda Somaliland, bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka, isagoo ku amaanayna beesha caalamka taageeradda dhinaca horumarka iyo arimaha bani’aadanimadda ee ay siiyaan bulshadda Somaliland.
Madaxweynuhu wuxu sidoo kale carrabka ku adkeeyey in aanay Somaliland ka mid ahayn dawlad-goboleedyada Soomaaliya, kana qayb geli doonin doorashooyinka ka dhacaya dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya.
Peter de Clercq ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee isuduwidda hawlaha bani’aadanimo ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Somaliland, ayaa isaguna dhankiisa sheegay in tiraba markii sadexaad ee uu Somaliland yimaado ay tahay marba marka ka danbaysana uu sii xiisaynayo. Waxa kale oo uu xusay kaalintii ay ka qaateen abaarihii baahsanaa ee dhacay Somaliland isagoo dhanka kalena sheegay sida loogu baahanyahay in laga gaashaanto in aanay abaarahaasi oo kale soo noqon. Waxaanu ka dhawaajiyey inay waddaan qorshe loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa biyaha roobabka ee iyagoo qulqulayaa badda galaya si looga faa’ iidaysto. Masuulkan ayaa waxa kuu ka dhawaajiyey sida ay ugu raja waynyihiin in doorashada soo socotaa sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto.
Kira Smith Madax-xigeenka safaaradda Denmark ee dalka kenya, ayaa ka warantay taageeradda beesha caalamku la garab taagantahay Somaliland waxaanay ku amaantay xukuumadda iyo shacabka somaliland horumarka dhinaca dimuqraadiyadda iyo nabadgalayadda. Sidoo kale waxay ka sheegtay inay taageerayaan Qorshaha Horumarinta Qaranka ee shanta sano ee 2016 -2021ka kaasoo diyaarintiisu meel fiican marayso. Waxay tilmaamtay sida ay beesha caalamku u danaynayso doorka haweenka ee siyaasadda iyo dhawrista xuquuqda haweenka iyo xoriyatul qawlka.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo daahfuray shirka qabyo qoraalka siyaasada guud ee dhulka
Shirkan yaa waxaa uu socon doonaa mudo 2 cisho ah waxaa soo qaban qaabiyay haayada nabada iyo horumarinta Somaliland Shirkan oo ka qabsoomay huteel maansoor ee magaalada hargaisa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha qorshaynta, deeganka, beeraha, hawlaha guud gaadiidka iyo guryaynta, xanaanada xoolaha,xildhibaanada golaha deegaanka iyo marti sharaf kale.
Ujeedada shirkan ayaa ahayd in lagu soo bandhigo daraasad ay samaysay haayada nabada iyo horumarinta Somaliland iyo in lays la eego qabyo qoraalka siyaasada guud ee dhulku yeelan doono,siyaasadan qabyo qoraalka oo ka kooban nidaamka kala xadaynta dhulka oo loo qaybiyey dhul dan guud ah oo ay umadu leedahay una maamuli doonto dawladu,dhul gaar loo leeyahay iyo dhul ay bulshadu leedahay.
Madaxweyene ku xigeenka jamhuuriyada Somaliland muden c.raxmaan ismacil saylici ayaa ka waramay dhibaatada dhulka oo aad u sii badanaysa,waxaana uu madaxweyne ku xigeenku kula dardaarmay xubnihii ka soo qayb galay shirkan inay u dul qaataan oo ay dhamaystaan mudada kooban ee shirku socdo
waxaa sidoo kale kahadlay wasiirka wasaarada qorshaynta qaranka ahna gudoomiyaha gudiga siyaasada guud ee dhulka isagoo sheegay in muhiimda shirkan layskugu yimid ay tahay in laysla eego islamarkaana lagu daro wixii ka dhiman sidoo kale waxaaa uu wasiirku sheegay in dhibaatada ugu way ee jirta ay tahay dhulka,dhulkaasi oo aan sifo sharci ah loo adeegsanayn oo laga ootay xoolihii iyo dadkii oo ay ooteen shakhsiyaad gaara Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayarka magaalada hargaisa mudane c.raxman soltelco oo isna dhankiisa ka waramay dhibaatada ka haysata dadka dhinacyada dhulka.
Gabagabadii shirkan waxaa lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa qabyo qoraalka siyaasada guud ee dhulka
Shir ay iskugu Yimaadeen Gudiga Qorshaha Qaranka Oo Ka Qabsoomay Xarunta Wasaaradda Qorshaynta Qaranka
Wasiirka Qorshaynta Qaranka oo Daah furay Mashruuc kor u qaadaya Dhaqaalaha Dalka
Mashruuca Dhaqaaleynta Ciidda iyo Biyaha ee Biyodhaca Sare ee Maroodijeex
Wasiirka wasaaradda Qorshaynta Qaranka oo faah faahin ka bixiyey heshiikii maalgashiga Dekeda berbera